यो हो मरेपछि स्वर्ग जाने बाटो ! - inaruwaonline.com
यो हो मरेपछि स्वर्ग जाने बाटो !
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २८, २०७२ समय: १६:३१:४१
एजेन्सी । यो संसारमा विभिन्न ठाउँ छन् जहाँबाट हेर्दा स्वर्ग देखिन्छ । जहाँ मानिस मरेपछि मात्रै पुग्नेगर्छ । उसो त अमेरिका होस् वा चीन वा नेपाल हरेक देशमा कही न कही स्वर्ग भेटिन्छ । तर, एउटा यस्तै ठाउँ चीनमा छ ।
चीनमा तियानमेन माउन्टेन छ जसको उचाई ६ हजार फिट छ । यो दुनियाकै सबैभन्दा उच्चो पहाड हो जहाँ एक गुफा छ । यसलाई एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस पनि भनिन्छ । चीनमा यो गुफालाई स्वर्गको ढोका पनि भनिन्छ । इतिहासअनुसार इश्वी सम्वत २५३ मा पहाडको कही भाग टुटेको थियो, जसका कारण यो गुफाको निर्माण भएको बताईन्छ । यसको लम्बाई १९६ फिट, उचाई ४३१ फिट तथा चौडाई १८७ फिट रहेको छ ।
यो पहाडको विशेषता यो हो कि यो चारैतिरबाट बादलले घेरिएको छ । त्यसकारण मानिसहरु यसलाई स्वर्गको ढोका भन्छन् । टूरिस्ट यहाँ आउनका लागि सड़कका साथै केबलकारको प्रयोग गर्छन् । विश्वकै सबैभन्दा लामो २४ हजार ४५९ फिट र उचाईमा बनेको यो केबलकारको नाम गिनीज बुक्स अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता छ । केबलका र सडकको यात्रापछि मानिस ९९९ सीढी (भर्याङ) चढेर गुफासम्म पुग्छन् । ताओ फिलसिफीका अनुसार यो ९९९ स्टेप सुप्रीम नम्बर हो र सम्राटको प्रतीक हो ।
यो गुफाको सुरुवात २०औं शताब्दीमा तियानमेन माउन्टेन नजिकै एक वाटरफलबाट भएको थियो । जून मात्र १५ मिनटका लागि देखिन्छ । त्यसपछाडी आफै गायब हुन्छ । यसको पानी १५०० मिटर उचाईबाट सिधै जमिनमा झर्छ । यद्यपी अहिले यो वाटरफलको कुनै नामोनिशान भेटिँदैन् । यो माउन्टेनका बारेमा यो पनि भनिन्छ कि यहाँभित्र अमूल्य खानी लुकेको छ । यसको खोजी गर्ने प्रयास बेला बेला गरिएको छ तर, सफल हुन सकिएको छैन् । हाल यो गुफालाई टूरिस्ट प्लेसका रुपमा परिचित गरिएको छ जहाँ हरेक वर्ष लाखौं पर्यटक घुम्न आउँछन् र स्वर्गको दर्शन गर्छन् ।